नेपाली जस्तै देखिने को हुन् यी युवती जो भाईरल छन् (फाेटाे फिचर)
पछिल्लो समय एकदमै भाइरल ह’ट गर्ल मेपंची एकदमै भाइरल बनेकि छिन् । विभिन्न सामाजिक संजाल मा उनको फोटो बाट नया फेक अकाउँट बनाएर उनकै फोटो हरु अपलोड गरि नेपालि जस्तै बनाउने हरु को कमि छैन यो क्रम पछिल्लो समय एकदमै बढ्दै गैरहेको छ ।
फेक अकाउन्ट बनाएर उस्तै बनाएर अरु लाइ ठगेको समाचार हरु पनि हामि सुन्न पाउछौ ! अरु नै देश को कलाकार लाइ नेपालि नाम दिई नेपालि कलाकार भन्दै बिदेशी कलाकार हरुको फोटो हरु पोस्ट गर्ने जमात बढ्दै गैरहेको छ ! पछिल्लो समय म्यान्मारकी एक मोडेल तथा नायिका एती भाइरल छिन कि उनि हेर्दा नेपाली जस्तै देखिन्छिन् ।
उनलाई नेपालि कलाकार भन्दै आफ्नो फेसबुक लाइक बढाउन को लागि उनको तस्बिर हरुको दुरुपयोग हुदै आइरहेको छ ! उनको फोटोहरु मा थुप्रै नेपालि नाम हरु दिएर आइडी हरु खोलिएका छन ।
को हुन् मेपन्चि-
मेपन्चिको वास्तविक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चिको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चिमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो । युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जिवनको भविष्य र एउटा बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पुरा गर्छन् त कोहि सपना पुरा गर्न चुक्छन् ।
मेपन्चिको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्चि पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकि छिन् । उनी एक असफल गायिका पनि हुन् ।